Tabaha safarka raqiiska ah ee ay tahay inaan tixgalino | Safarka Absolut
Tilmaamaha safarka raqiiska ah
Mararka qaarkood waxaan go'aansanaa inaanan safrin sababo dhaqaale awgood. Waxaan marwalba u maleyneynaa inay noqon doonto qarash xad dhaaf ah. In kasta oo aysan ahayn inay sidan ahaato, haddii aan qaadno tallaabooyin gaar ah. Qiyaasaha qaarkood ee ku yimaada qaabka tilmaamaha safarka jaban. Maxaa yeelay marwalba waxaa jira xalal aan wax u dhimeynin jeebkeena.
Haa, waxay umuuqataa xoogaa wax aan macquul aheyn, laakiin maanta waxaad ogaan doontaa sida talaabooyinka yar yar, aad u keydin karto wax kabadan inta aad u maleyneyso. Sidan oo kale, qofna iyo waxna kama qaadi karaan dhalanteedkaaga safarkaas oo aad muddo ka fikiri jirtay. Waa waqtigii u bax si aad ugu raaxaysato adigoon ka baqayn dhaqaalaha. Diyaar ayaad tahay ?.
1 Meelaha ugu raqiisan
2 Talooyin ku saabsan safarka raqiiska ah, iibsashada tigidhada
3 Sida loo badbaadiyo qolka iyo guddiga
4 Ku keydso gaadiidka meesha aad u socoto
5 Lacag samee intaad fasax ku jirto?
Meelaha ugu raqiisan
Haddii sheygaagu runti safrayo, wax la mid ahi ma jiraan ma raadinayo meel cayiman. Kaxayso magaalooyin fog fog ama dalal, laakiin intaas ka caajisi maayaan. Waxaad hubtaa inaad soo ogaatay dhagaxyo run ah, xitaa haddii aysan had iyo jeer ka muuqan daboolida meelaha ugu muhiimsan. Kuwii labaad sidoo kale aad ayey muhiim u yihiin oo sidaas oo kale, si loo kobciyo koritaankooda, tikidhadu way yara jaban yihiin marka loo eego meelaha kale ee dalxiiska u dalxiis tago Waxay noqon doontaa labo mid mid, maxaa yeelay dhinac waxaad keydin doontaa lacag aad u badan dhanka kalena, waxaad ogaan doontaa meel cusub oo hubaal ka mid aheyn mudnaantaada.
Talooyin ku saabsan safarka raqiiska ah, iibsashada tigidhada
Maaddaama aynaan dan ka lahayn meesha loo socdo, tallaabada xigta waa in la fiiriyo tikidhada. Shaki la'aan, furaha ayaa kujira raadi dalabyo. Haddii aadan heli karin, xusuusnow in habeennimada Talaadada ay tahay ikhtiyaarkaaga ugu fiican. Waa maalin ay sida caadiga ah ka helaan tikidho aad u jaban. Had iyo jeer waa muhiim in la isbarbardhigo qiimaha iyada oo ay ugu mahadcelinayaan kuwa kala duwan matoorada raadinta duulimaadka. Qodob kale oo maskaxda lagu hayo waa in safarada tooska ahi badanaa qaali yihiin. Taasi waa sababta haddii aad duuli doontid, aad mar walba sameyn karto joogsiyo kala duwan. Haa, waxay u noqon kartaa dhib dad badan laakiin keyd u ah kuwa kale.
Ha eegin bixitaanka garoonka diyaaradaha ama saldhigga kuugu dhow magaaladaada. Waxaa laga yaabaa in yar oo ka sii fog, waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku keydiso qiimaha tigidhka. Waxay tagaysaa iyada oo aan la sheegin in ay ugu fiican tahay in la safro toddobaadki oo laga fogaado labada usbuuc dhammaadka iyo xilliga sare ee fasaxyada xagaaga ama maalmaha kale ee loogu talagalay sannadka. Waxaa laga yaabaa inay kugu dhacday in markii aan bilowno inaan isbarbar dhigno qiimaha tikidhada, mararka qaarkood iyo daqiiqado gudahood inay kor ugu kacdo sida xumbo oo kale. Ha welwelin, waxa ugu fiican ee aad sameyn kartid si aad uga hortagto tan waa inaad ka tirtirto kumbuyuutarka kombuyuutarkaaga.
Sida loo badbaadiyo qolka iyo guddiga
Shaki la'aan, hoyga waa mid kale oo ka mid ah qodobbada ay tahay inaan ka xirno intaanan bixin. Waxaa jira ikhtiyaarro badan oo internetku na siiyo, laakiin markale, waxaan sameyn doonnaa isbarbardhig. Waxaan isku dayi doonaa inaan ku kalsoonaanno makiinadaha raadinta iyo xulashooyinka ay nooga tagayaan. Haddii aad weli ku jirto miisaaniyaddaada, marwalba waxaa jira waxyaabo kale oo lagu beddeli karo. Waxa ugu fiican ayaa ah dooro magaalooyinka ku hareeraysan oo ha galin magaalooyinka waaweyn ee had iyo jeer qiimaha ugu dambeeya qaali ka dhiga. Waa inaad naftaada u sheegtaa haddii taariikhaha safarkaaga, ay jirto dhacdo muhiim ah maxaa yeelay shaki la'aan, baahida qolalka ayaa sii weynaan doonta.
Maanta waxaa jira dalabyo badan oo aan ku haysanno hoteelo, iyada oo aan loo baahnayn hudheelo xiddigo badan leh. Sidoo kale waa mid aad moodada fadhiga sariirta, taas oo ku saabsan dadka kaa fura albaabada gurigooda isla mar ahaantaana aad kireysan karto fadhigooda. Si la mid ah isweydaarsiga fadhiga, sidoo kale waxaa jira is dhaafsi guryo ah. In kasta oo ay xaaladdan tahay, haddana way yaraan kartaa. Cunnada sidoo kale waxaan ku keydin karnaa lacag aad u badan, laakiin waxa ugu fiican ayaa ah in la doorto meelaha lagu iibiyo cuntada degdegga ah ama meelaha ugu caansan, oo aad ka heli doontid haddii aad weydiiso dadka aagga. Dabcan, cuntada waad ka qaadan kartaa guriga haddii aad waqti ku qaadaneyso garoonka diyaaradaha ama saldhigyo kala duwan. Kheyraad kale oo la keydin karo ayaa ah in laga iibsado dukaamada waaweyn oo had iyo jeer leh xulashooyin lagu qaboojiyo cayayaanka.
Ku keydso gaadiidka meesha aad u socoto
Marka aan tagno goobta nasashada, waxaan sidoo kale dooneynaa inaan ka faa'iideysano oo aan aragno geesaha oo dhan. Laakiin tan awgeed, waxaan u baahan doonnaa habka gaadiidka. Xaaladdan oo kale, waa inaan ka fikirnaa maalmaha aan halkaas joogi doonno. Haddii ay ku filan yihiin, waxa ugu habboon ayaa ah in la siiyo kaar. Waxaa jira meelo badan oo leh oo dabcan, waxaad uga gudbi kartaa hal meel meel kale qiimo aad u jaban. Waxaa laga yaabaa inaad taqaanno Kaarka Metro, ama Kaarka Magaalada. Kaliya waa inaad ka heshaa midka meesha aad u socoto oo aad sameyso, had iyo jeer horayba.
Haddii aad maalmo yar ka baxdo, marwalba waad awoodaa ku raaxayso gunnooyinka ama wadaag baabuur iyo xitaa kiro baaskiil. Habka ugu fiican ee lagu tagi karo indho indheynta iyo jimicsi yar isla waqti isku mid ah. Dabcan, waxaas oo dhan waxay ku xirnaan doonaan meesha loo doortay inay ku qaataan fasaxaaga. Waxa ugu muhiimsan oo dhan waa in si fiican loo hubiyo bogagga dalxiiska ee magaalada ama waddanka gaar ahaan sidaas darteed, la ogaado waxa aan wajihi doonno iyo waxa ay yihiin xaaladeedu.
Lacag samee intaad fasax ku jirto?
Haa, waa qorshe umuuqda inuu si hufan u shaqeynayo. Dabcan, shaki la'aan, mar dambe looma magacaabi karo fasax habboon. Weli, had iyo jeer waa hab ku habboon in lagu tago meesha aan u socono, laakiin aan kharash badan lagu bixin. Hadaanay ahayn cakis. Waxaan awood u yeelan doonnaa inaan la soo noqonno anagoo jeebbada ka buuxsanay sidaan filayno. Dhinac, waad awoodaa macallin ama turjumaan noqo haddii aad aadeyso waddan shisheeye oo aad u leedahay karti u leh. Waxaad sidoo kale ku iibin kartaa sawirrada safarkaaga khadka tooska ah. Ma ahan wax sahlan maxaa yeelay waxaa jira tartan badan laakiin marwalba waxay noqon kartaa bilow. Intaas waxaa sii dheer, waxaad ka heli kartaa wax sida ka shaqeynta meelaha lagu caweeyo ama kormeeraha. Fikradaha waa kuwo aan dhamaad laheyn oo xoogaa nasiib ah, waxaan xaqiiqdii gaari doonnaa ujeedkeena. Tilmaamahee ku saabsan safarka raqiiska ah ee aad badanaa isticmaasho?
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Tilmaamaha safarka raqiiska ah
Maxaa lagu arkaa Verona